10 Best cafes N'ihi The Best Coffee Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Best cafes N'ihi The Best Coffee Na Europe
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 11/12/2020)
Europe na-arụpụta na-erepịakwa ihe-apụghị ịghọta aghọta ego nke kọfị, ya nwere mma kọfị ụlọ ahịa na cafes na Europe. Ọ bụ kọfị hụrụ kọfị n'anya na hoo haa, a ukwuu karịa nnọọ na. Cafe omenala bụ a window na ụwa. Anyị na-achọ kọfị ụlọ ahịa karịa anyị na-eleta na-akpali ngosi ihe mgbe ochie, ncheta, ụlọ arụsị, na chọọchị dị iche iche! Gịnị ga-Paris, Vienna, na Italy na-enweghị ha enviable Cafe omenala?
Ebe a na- 10 Best cafes N'ihi The Best Coffee Na Europe!
Kọfị na cafes jikọọ anyị. Anyị ịṅụ na esi ísì, itinye na na-akpali obodo ma ọ bụ ndị a hụrụ n'anya, kwụpụ na nsogbu nke ndụ nke oge a. Ọ bụ Elixir of arụpụtaghị.
E nwere ọtụtụ narị kacha mma kọfị ụlọ ahịa na Europe uru ịga, ndị a bụ ndị a nhọrọ nke ihe anyị kweere bụ 10 Best cafes N'ihi The Best Coffee Na Europe:
1. Barcelona: Satan Coffee Nkuku
Nke a ahịa kọfị na etiÚnye hip na hipster. Ọ na-ekesịpde site na a 25 afọ onye bụ na ịhụnanya na-kọfị agwa. O nlezianya mụtara nkà nke itiwapụ ya ejikọta. Ha na-agbanwe na oge otú ijide n'aka na-arịọ ya ihe ndị dị ugbu ngwakọta bụ.
Iji zuo ezu ndị a magburu brews, a dịgasị iche iche nke arụrụ n'ụlọ snacks dị maka zuo. Sere elu a oche, enwe nnukwu windo na ka a iyi nke ìhè na ma na-ekiri ụwa laa site. Nke a bụ maa otu n'ime ndị kasị mma kọfị ụlọ ahịa na Europe.
Art Deco bụ ọmarịcha style of Cafe Odeon na Zurich. Nke a bohemian classic meghere ibo ụzọ ya na 1910 na bụ ma ama maka ịbụ ebe obibi nke ndị so dee, na-ede uri, egwú, na ụbụrụ na-aghọ. Ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị ama ọbịa na-agụnye Albert Einstein na Picasso.
Nke a bụ ochie akwụkwọ European nghọta na elu uko ụlọ, brasserie oyiyi akwa, enyo gosipụtara na mgbidi, na ndokwa ejiji ejiji.
A surf-sitere n'ike mmụọ nsọ ahịa kọfị na Paris bụ ihe ị na-mgbe ihe Aussie na Frenchie amalite a ahịa kọfị, na otu n'ime ndị kasị ama Cafe omenala Ara obodo na ụwa. Ọ na-eme ya elu na ndepụta kasị mma anyị kọfị ụlọ ahịa na Europe.
O Coffeeshop anaghị tụkwasịrị na ụfọdụ ọkacha mmasị tinyere noisettes, okpu, na ewepụghị ọcha. Àkwá Benedict bụ a showstopper, wee jide n'aka na ịtụ ya!
Vienna nwere a ọgaranya kọfị omenala akụkọ ihe mere eme; ndị mmadụ congregating ma na-ekwurịta na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, okpukpe, na sayensị. Dere na ụbụrụ na-aghọ sipping zuru okè ime biya ke miri nkà ihe ọmụma na mkparịta ụka. Ọ bụghị ọtụtụ agbanweela si ochie ụbọchị taa na ọ bụ otu n'ime anyị mmasị kacha mma kọfị ụlọ ahịa na Europe.
Cafe Schwarzenberg bụ ezigbo ụlọ ahịa kọfị ke Vienna. Ọ bụ omenala, ọmarịcha, na n'ụzọ zuru okè photogenic nke ọzọ oké Instagram picture, #kọfị.
5. Brussels: Foto Ụlọ Nga
Ekele iche dị ka Mok, Brussels na-ịkpata ya ntụpọ na kacha mma kọfị ụlọ ahịa na Europe map.
Ha hụọ ha kọfị onwe ha nke sụgharịta ya ịbụ nke kasị mma.
The nri utom ke Mok bụ niile anaghị eri anụ efere, mgbe ị na-aṅụ a na-atọ ụtọ ewepụghị ọcha, i nwere ike Tuck n'ime sweet porridge na akụ, mkpụrụ osisi grepu, pomegranate, na vegan yogot.
Starbucks na Italy? Ọ na-adị na-ezighị ezi ma, ọ bụ ya mere nri. Espresso bụ onyinye Milan nyere ụwa na Milano Roastery akwụ kpọ isi ala na na zie ezie e kere eke.
Ọ kpọwo ihe nkiri nke kọfị. Ọ maa nwere ebe anyị kacha mma kọfị ụlọ ahịa na Europe ndepụta. Nke a ohere bụ a ememe nke kọfị omenala na nwere a akatabi okop ụlọ na a ala nke nkà Roastery. Eche Willy Wonka osobo kọfị.
7. Lisbon: Copenhagen Coffee ụlọ nyocha
The Copenhagen Coffee ụlọ nyocha bụ a obere yinye na ịwa ahụ na-eme ka nnukwu mmiri na ebili mmiri na kọfị ụlọ ọrụ. Ọ na-ngwa-ngwa-aghọ otu nke kasị mma kọfị ụlọ ahịa na Europe. The Copenhagen Coffee ụlọ nyocha bụ a ike kwere ekwe na-atọ ife kọfị omenala. Nke a pụtara na ha na-enwe ekele maka kọfị dị ka ihe ọrụ aka ma ọ bụ nka onunu na o doro anya na-eme ka ndị niile dị iche.
Ndị nwe Kaffeine gaa Australia na New Zealand na hụrụ ha n'ike mmụọ nsọ maka a ahịa kọfị na ha nwere ike imeghe na London. Ha nrọ e mezuru na ha meghere onye nke kasị mma kọfị ụlọ ahịa na Europe.
Dị ka ọtụtụ kọfị ụlọ ahịa na Europe, nri a nke ahụmahụ na Kaffeine sokwa. salads, sandwiches, na ihe ọ bụla dị ọkụ si na oven dị na menu.
9. Edinburgh: ime biya ụlọ nyocha
na Edinburgh, ime biya ụlọ nyocha bụ na-emekarị ma ọ bụ otu n'ime ndị kacha mma kọfị ụlọ ahịa na Europe.
Ime biya Labs iche nwere ndị mmadụ n'ibi na ibo ụzọ ha n'ihi na ihe. Ha kọfị menu bụ a Agba ha ahuhu.
Ọ na atụmatụ anọ n'usoro otu si coffees. Abụọ e brewed na ha ime biya mmanya na ndị ọzọ na abụọ na ha espresso mmanya. Coffee ụzọ abụọ deliciously na achicha ma ọ bụ pastries, nke ime biya ụlọ nyocha nwere ọtụtụ.
10. Prague: mbuaha
Modern, enwu, ma dị egwu, Misto bụ kwesịrị.
The aha bụ Czech maka, The ebe. Ha ọpụrụiche bụ ọgaranya kọfị ọṅụṅụ na na-atọ ụtọ nri.
Ọ dịghị mkpa na oge, nri ụtụtụ, nri ehihie, ma ọ bụ nri abalị, Misto ga-anabata gị na ezi style ma hụ na ị na-esi gị caffeine fix.
Enwe mmasị anyị isiokwu “10 Best cafes N'ihi The Best Coffee Na Europe”? Book na Save A Train na-amalite gị kọfị Cafe omenala njem!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “10 Best cafes N'ihi The Best Coffee Na Europe” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cafes-europe%2F የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / pl na / fr ma ọ bụ / es na ndị ọzọ asụsụ.
Cafe cafelover kọfịkọlị NjemBrussels Njem London NjemMilan travelparis TravelVienna NjemZurich